နှငျးဆီပရိသတျတှအေတှကျ တမူထူးခွားပွီးပြျောစရာကောငျးတဲ့ သူတို့ရဲ့အစီအစဉျသဈလေးကို ပွောပွလာတဲ့ နတေိုး.. – Shwewiki.com
နှငျးဆီပရိသတျတှအေတှကျ တမူထူးခွားပွီးပြျောစရာကောငျးတဲ့ သူတို့ရဲ့အစီအစဉျသဈလေးကို ပွောပွလာတဲ့ နတေိုး..ရဲ့ အကွောငျးလေးကို ပရိတျသတျကွီးအတှကျ တငျဆကျပေးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ..
ပရိသတျကွီးရေ.. သရုပျဆောငျကောငျးတဲ့အပွငျ အဆိုပိုငျးနဲ့ ပနျးခြီတှအေပွငျ ရှုတငျမိတျကပျတှမှောလညျး ထူးခြှနျတဲ့စှယျစုံရအနုပညာရှငျကတော့ တညျငွိမျခနျ့ညားပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့နှငျးဆီခိုငျ မငျးသားခြောနတေိုးပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။
ပရိသတျတှကွေား အမွဲရပေနျးစားအောငျမွငျနပွေီး လူကွိုကျမြားတဲ့ နှငျးဆီအဖှဲ့ကလညျး ရယျမောပြျောရှငျစတေဲ့ ရယျစရာဟာသလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ဘဝအမောလေးတှကေိုပွပြေောကျစကွေတာမို့လညျး သူတို့အဖှဲ့လေးကို အားလုံးက ခဈြခငျသဘောကနြကွေတာပါ..။
အခုတဈခါမှာလညျး နတေိုး၊ ကြျောကြျောဗိုလျ၊ မငျးမျောကှနျး၊ ထှနျးထှနျး၊ ရဲလေးတို့ နှငျးဆီအဖှဲ့သားတှကေတော့ တမူထူးခွားတဲ့ အစီအစဉျအသဈလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေိုနှဈသကျသဘောကအြောငျ ဖနျတီးတငျဆကျပေးတော့မှာပါနျော.။
ပြျောစရာကောငျးတဲ့ အစီအစဉျလေးတခု စီစဉျထားပါတယျ.
ကြှနျတျောတို့နှငျးဆီတှလေညျး ပြျောနရေမယျ့ အစီအစဉျလေးပါ .
အဲ့အစီအစဉျလေးက ဘာလဲဆိုတော့ နှငျးဆီပရိသတျတှေ အတှကျ သီးသီးသနျ့သနျ့ နှေးနှေးထှေးထှေး ဆုံတှအေ့ားပေးလို့ရမယျ့ Private Closed Group လေးတခု ကို ဖနျတီးထားပါတယျ.
နှငျးဆီကိုခဈြသော ပရိသတျမြား အနနေဲ့
ကြှနျတျောတို့ ဖနျတီးထားတဲ့ Private Closed Group လေးထဲကို Group Member အဖွဈဝငျရောကျပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဖြျောဖွတေငျဆကျ မှုမြားကို အားပေးကွညျ့ရှု နိုငျမှာဖွဈပါတယျ.
ဒီနှငျးဆီတှရေဲ့ Private Closed group ထဲကို ပရိသတျတှေ က Group Members အဖွဈ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှု အားပေးဖို့အတှကျ Facebook account တဈခုကို ကပျြ ၅၀၀၀ သာပေးရမှာဖွဈပါတယျ.
ဒီ နှငျးဆီတှရေဲ့ Private Closed Group ထဲကို လာ ရောကျ Join ထားဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ.
Private Close group နာမညျ နဲ့ ပွုလုပျမယျ့ရကျနဲ့ အခြိနျကိုလညျး ထပျမံ ကွငွောသှားပါမယျဗြာ.
သခြောတာကတော့ ကြှနျတျောတို့ နှငျးဆီပရိသတျတှေ အရမျးပြျောနစေမေယျဗြာ.
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့အပြင် အဆိုပိုင်းနဲ့ ပန်းချီတွေအပြင် ရှုတင်မိတ်ကပ်တွေမှာလည်း ထူးချွန်တဲ့စွယ်စုံရအနုပညာရှင်ကတော့ တည်ငြိမ်ခန့်ညားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင် မင်းသားချောနေတိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ပရိသတ်တွေကြား အမြဲရေပန်းစားအောင်မြင်နေပြီး လူကြိုက်များတဲ့ နှင်းဆီအဖွဲ့ကလည်း ရယ်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့ ရယ်စရာဟာသလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဘဝအမောလေးတွေကိုပြေပျောက်စေကြတာမို့လည်း သူတို့အဖွဲ့လေးကို အားလုံးက ချစ်ခင်သဘောကျနေကြတာပါ..။
အခုတစ်ခါမှာလည်း နေတိုး၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း၊ ရဲလေးတို့ နှင်းဆီအဖွဲ့သားတွေကတော့ တမူထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်အသစ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုနှစ်သက်သဘောကျအောင် ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါနော်.။
နှင်းဆီပရိသတ်တွေအတွက် Private Closed Group လေး တခုကိုဖန်တီးပြီး ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Fb Acc တစ်ခုကို ငွေကျပ်(၅၀၀၀)သာ ပေးချေကာ Group Member အဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေကို အားပေးကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
“အေးချမ်းတဲ့❄ December လရဲ့ ညတစ်ညမှာ
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးတခု စီစဉ်ထားပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့နှင်းဆီတွေလည်း ပျော်နေရမယ့် အစီအစဉ်လေးပါ .
အဲ့အစီအစဉ်လေးက ဘာလဲဆိုတော့ နှင်းဆီပရိသတ်တွေ အတွက် သီးသီးသန့်သန့် နွေးနွေးထွေးထွေး ဆုံတွေ့အားပေးလို့ရမယ့် Private Closed Group လေးတခု ကို ဖန်တီးထားပါတယ်.
နှင်းဆီကိုချစ်သော ပရိသတ်များ အနေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ Private Closed Group လေးထဲကို Group Member အဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက် မှုများကို အားပေးကြည့်ရှု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.
ဒီနှင်းဆီတွေရဲ့ Private Closed group ထဲကို ပရိသတ်တွေ က Group Members အဖြစ် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု အားပေးဖို့အတွက် Facebook account တစ်ခုကို ကျပ် ၅၀၀၀ သာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်.
ကျွန်တော့်တို့ နှင်းဆီတွေ ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို သိချင်ရင်တော့
ဒီ နှင်းဆီတွေရဲ့ Private Closed Group ထဲကို လာ ရောက် Join ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.
Private Close group နာမည် နဲ့ ပြုလုပ်မယ့်ရက်နဲ့ အချိန်ကိုလည်း ထပ်မံ ကြေငြာသွားပါမယ်ဗျာ.
သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ နှင်းဆီပရိသတ်တွေ အရမ်းပျော်နေစေမယ်ဗျာ.
Stay Tuned……” ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ်လေးကို နေတိုးက ပြောပြထားတာမို့ member အဖြစ် ပါဝင်ပြီး အားပေးကြဖို့ အသင့်ပဲလား ပရိသတ်ကြီး..။